Xiaopeng နှင့် Haima အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် OEM သဘောတူညီချက် သက်တမ်းကုန်ဆုံး သွား သည် - Pandaily
Xiaopeng နှင့် Haima အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် OEM သဘောတူညီချက် သက်တမ်းကုန်ဆုံး သွား သည်
Jan 06, 2022, 12:46ညနေ 2022/01/08 00:04:22 Pandaily
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် Haima Motors က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ အပြန်အလှန် အကျိုးပြု သည့် ပလက်ဖောင်း မှတဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်Xiaopeng နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ပူးပေါင်း မှုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် အဆုံးသတ် ခဲ့သည်သူက ဆက်ပြော သည်မှာ ၎င်းသည် အမြဲတမ်း ပွင့်လင်း ပြီး နိုင်ငံခြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်သည်။
Haima ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏အဓိက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု များဖြစ်သည်။ 2017 ခုနှစ်တွင် Xiaopeng ပထမ ဦး ဆုံး ကား Xiaopeng G3 ထုတ်လုပ် သောကား ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရည်အချင်း မပြည့် မှီ မီ Haima Automobile နှင့်ပူးပေါင်း ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Xiaopeng တွင် G3, P7 နှင့် P5 သုံးမျိုး ရှိသည်။ ကုမၸဏီ ကလည္း တရားဝင္ ေၾကျငာ ထားၿပီးGuangzhou Auto Show မှာ G9 SUV ကား။ ယခုအခါ ၎င်းသည် ကားများ ထုတ်လုပ်ရန် အရည်အချင်းပြည့်မီ ပြီး Zhaoqing, Guangdong တွင် စက်ရုံ တစ်ရုံ ရှိပြီး Guangzhou နှင့် Wuhan တို့တွင် စက်ရုံ အသစ် များတည်ဆောက် နေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ် သြဂုတ်လတွင် Zhaoqing site ၏ဒုတိယ အဆင့်ကို စတင် ဆောက်လုပ် ခဲ့သည်။ ထို site ၏နှစ် စဉ် ထုတ်လုပ်မှု သည် ယူနစ် ၂၀၀၀၀ အထိရောက်ရှိ လိမ့်မည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် Xiaopeng သည် ၂၀ ၂၃ ခုနှစ်တွင် ထုတ်လုပ်မှု စတင် ရန်မျှော်လင့် ထားသော ယူနစ် ၁၀၀၀၀၀ ထုတ်လုပ် ရန်စီစဉ် ထားသော Wuhan စက်ရုံ စီမံကိန်းကို တရားဝင် စတင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ရောင်းအား သိသိသာသာ ကျဆင်း မှုကြောင့် Hippocampus သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အရှုံးပေါ် ခဲ့ပြီး ဖျက်သိမ်း ခံ ရမည့် အန္တရာယ် နှင့် ရင်ဆိုင် ခဲ့ရသည်။ Delisting ၏အ ကြပ် အတည်း ကိုဖယ်ရှား နိုင်ရန်အတွက် Haima Co., Ltd. သည် ပျင်းရိ သော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို စွန့်ပစ် ခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ အရင်းအနှီး ကိုပြန်လည် ဖြည့်တင်း ခြင်းကဲ့သို့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် အရှုံး ကို အမြတ်အစွန်း အဖြစ်ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။ သို့သော်ဤ အစီအမံ များသည် သူတို့ ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၏အခြေခံ ပြ problems နာများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း မ ဖြေရှင်း နိုင်ပါ။
Haima မှ ထုတ်ပြန်သော စွမ်းဆောင်ရည် အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၀ တွင် ကုမ္ပဏီ သည်ယွမ် ၁. ၃ ဘီလီယံကျော် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ ၀၄ သန်း) ဆုံးရှုံး ခဲ့သည်။ Xiaopeng ၏ OEM အမှာစာ များ ဆုံးရှုံး ခြင်း သည်၎င်း၏ ဆုံးရှုံး မှုများကို ပိုမိုဆိုးရွား စေသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaopeng သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် စမတ် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၁ ၆၀၀၀ ကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၁ ၈၁% တိုးတက်ခဲ့သည်။
လက်ရှိတွင် Haima မော်ဒယ် လေးမျိုး ရှိသည်။ plug-in hybrid မော်ဒယ် Haima 6P ၊ လောင်စာဆီ မော်ဒယ် 7X, 8S နှင့်လျှပ်စစ် မော်ဒယ် Aishang EV တို့ဖြစ်သည်။ Haima သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမနှစ်ဝက် တွင်စုစုပေါင်း ကား အစီးရေ ၁၆, ၅၀၀ ရောင်းချ ခဲ့ပြီး Xiaopeng G3 လမ်းဘေး ယာဉ် ၁၁, ၂၀၀ အပါအ ၀ င် ၆၇. ၉၅% ရှိသည်။
ထို့အပြင် Haima Co., Ltd. က ဇူလိုင်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် မိတ်ဖက် FAW Co., Ltd. သည် ရှယ်ယာ များကို Hainan Development Holdings သို့ အခမဲ့ လွှဲပြောင်းပေး လိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Haima Co., Ltd. နှင့် FAW Co., Ltd. အကြား ၂၃ နှစ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆုံးသတ် သွား ပြီဖြစ်သည်။
Xiaopeng Automobile စျေးနှုန်း asNEV ထောက်ပံ့ငွေ ကျဆင်း ခဲ့သည်
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မှစ၍ စွမ်းအင် ယာဉ် အသစ် များအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၃၀% ကျဆင်း လိမ့်မည်။ တနင်္လာနေ့၊XiaopengMotors က မော်ဒယ် အားလုံး ၏နောက်ဆုံး ထောက်ပံ့ငွေ စျေးနှုန်း များကို ကြေငြာ ခဲ့ပြီး အနည်းငယ် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
XPeng က Guangdong အစိုးရထောက်ပံ့ငွေ ယွမ် သန်း ၅၀၀ ရရှိ
တရုတ်လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်သူ XPeng Motors က တနင်္လာနေ့က ကြေညာခဲ့ပြီး Guangdong အစိုးရဆီက ဘဏ္ဍာငွေ ယွမ် သန်း ၅၀၀ (ယွမ် ၇၇ သန်း) ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
BYD Qin Plus DM-i သည် Guangdong တွင် မီးလောင် ခဲ့သည်
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က အြန္လိုင္း တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ လာေသာ ဗီဒီယုိ ဖုိင္ အရ BYD Qinga DM-i အမည္ရွိ ကားတစ္စီး သည္ လမ္းေဘး ၌ ရပ္ ထားေသာ ယာဥ္ တစ္စိတ္တစ္ ပိုင္း မီးေလာင္ကၽြမ္း ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈ မရွိေပ။